फोर ह्वील ड्राइभ ट्रक र स्कुल बसमा हामी अब्बल छौंः युगो हासीमोतोको अन्तर्वार्ता - MeroAuto
फोर ह्वील ड्राइभ ट्रक र स्कुल बसमा हामी अब्बल छौंः युगो हासीमोतोको अन्तर्वार्ता
2075:8:2 1:20 PM
गत बिहीबार नेपालको लागि एसएमयल इसुजुको आधिकारीक वितरकको रुपमा गोल्ड फिस इन्टरनेशनलसँग सम्झौता तथा आधिकारीक बिक्रीको सुरुवात गर्न आएका एसएमएल इसुजु लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ युगो हासीमोतोसँग मेरोअटोले कुराकानी गरेको थियो ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि बिक्री–वितरण सुरु भएको भए पनि खासै बजार विस्तार गर्न नसकेको, नयाँ डिलर नियुक्तपछि कम्पनीले राखेको अपेक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एसएमएल इसुजुको बजार र नेपालमा कसरी अगाडि बढ्नेलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कमर्शियल सेक्टरमा इसुजुको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति कस्तो छ ?
म साउथ एसियामा काम गरिरहेको हुँदा टाढाको कुरा गर्नुभन्दा यही क्षेत्रको कुरा गर्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । इसुजु मोट्र्स इन्डियामा इसुजुको ५० प्रतिशत हिस्सेदारी छ । र, यो कम्पनीको व्यवस्थापन इसुजु मोट्र्सले प्रत्यक्षरुपमा गर्दैन ।
मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाकाबारे धेरै जानकारी पनि छैन । तर, भारतको कुरा गर्दा भने हामी प्राविधिकरुपमा चुस्त उत्पादन प्रणाली र प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरू उत्पादन गर्न तल्लिन छौँ ।
हामीसँग उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै जादुको छडीजस्तो रणनीति त छैन । तर, हामी गर्नुपर्ने काम भनेको आफ्ना उत्पादनहरूको गुणस्तर बढाउनु नै हो ।
कार्बन उत्र्सजनका विषयमा भारत सरकारले धेरै नीति–नियमहरू बनाउँदै गरेको हुनाले हामी त्यसमा पनि केन्द्रित भएका छौँ । समग्रमाभन्दा हामी अहिले यो क्षेत्रमा बन्दै गरेका विभिन्न नीति–नियमहरूअनुरुप आपूmलाई ढाल्दै, आफ्ना उत्पादनहरूको पनि गुणस्तर बढाउन लागिपरेका छौँ ।
तपाईंहरूले नेपालमा लक्ष्मी ग्रुपसँग सहकार्य गर्नुभएको छ, भावी योजनाहरू के छन् ?
मैले आजै लक्ष्मी ग्रुपका तर्फबार विस्तारित कार्ययोजना प्राप्त गरेको छु । म यसबाट निकै प्रभावित भएको छु । र, यसलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु ।
यो योजनाअनुसार काम गर्दा नेपालको बजारमा राम्रो उपस्थिति जनाउनुकासाथै ग्राहकहरूको पनि विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
नेपाली बजारमा कुन उत्पादनको बढी सम्भावना देख्नुभएको छ ?
हामी ट्रक र बस उत्पादन गर्ने कम्पनी हौं । हामी यहाँ बसमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ । अझ, हामी स्कुल बसको सेक्टरमा निकै बलियो छौँ जस्तो लाग्छ । कम्युनिटी बस र स्टाफ बस पनि हामीले महत्व दिएका सेक्टरहरू हुन् । फोर ह्वील ड्राइभ ट्रकको सेक्टरमा पनि हामी बलियो नै छौँ । नेपाल निर्माणको चरणमा रहेको हामीले बुझेका छौँ । त्यसले यहाँको आवश्यकताअनुसारको उत्पादन हामी दिन सक्नेछौँ ।
तपाईंकाअनुसार तपाईंहरू बढी केन्द्रित हुने सेक्टर भनेका ट्रक र बस हुन् । तर, नेपालमा यो सेक्टरमा टाटा, महिन्द्रा, अशोक लेल्याण्डजस्ता कम्पनीहरू निकै हावी छन् । यस्ता कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तपाईंहरूसँग कुनै विशेष योजना छन् कि ?
उनीहरू निकै बलिया प्रतिस्पर्धी भएकामा कुनै शंका छैन । हामीसँग उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै जादुको छडीजस्तो रणनीति त छैन । तर, हामी गर्नुपर्ने काम भनेको आफ्ना उत्पादनहरूको गुणस्तर बढाउनु नै हो ।
साथै, हाम्रो आधिकारिक डिलर गोल्ड फिसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । स्पेयर पाट्र्स, सर्भिस आदिको क्षेत्रमा हामीले बलियो सञ्जालको निमार्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ग्राहकहरूको चाहना र आवश्यकतामा खरो उत्रन मद्दत पुग्छ ।
नेपालमा ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’का केही समस्याहरू छन् । यसलाई कसरी हल गर्ने सोच्नुभएको छ ?
अब हामीले लक्ष्मी ग्रुपजस्तो कम्पनीसँग साझेदारी गरिसकेपछि त यो कुनै समस्या नै रहेन नि हैन ? (लामो हाँसो) ।
फक्सवागेन जुट्यो ईभी निर्...
भारतमा होन्डाले बन्द गर्य...